हिमाल खबरपत्रिका | स्थानीय भूकम्प, स्थानीय निकाय
जब भूगर्भमा रहेको उपमहाद्वीपीय 'प्लेट' तिब्बती 'प्लेट' सँग घिसि्रयो; कम्पन चल्यो, भूसतहमा भवन ढले, धूलो उड्यो, ज्यान बित्यो। 'प्रकृतिलाई मानिस चाहिंदो रहेनछ', धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले भने। हुन पनि भूगर्भको यस्तो कठोर खेल प्रकृतिको नियम अन्तर्गत नै भएको छ– कहिले भनेर भन्न सकिंदैन, तर करीब ७० देखि ९० वर्षको दौरानमा नेपालमा महाभूकम्प जान्छ नै। प्रकृतिले कहिले भुईंचालो पठाउँछ आजसम्म विज्ञानले बताउन सकेको छैन, तर महाभूकम्प अगाडिको तयारी र प्रलयपछिको उद्धारमा त मानव चुस्तता देखाउन सकिन्थ्यो। ठूलो भूकम्प आउँछ है भनिकन जतिकै फुक्दा पनि आखिर राज्य संयन्त्र तयार रहेनछ।
नेपाली नागरिकको आश त भूकम्प प्रकट हुँदा राज्यको उच्चतम 'रेस्पोन्स्' थियो; हाइटी, काश्मीर वा सिचुवानको भूकम्पसँग तुलना नगरिकन। सरकारको क्रियाकलाप जनताको आश र अपेक्षा अनुरुप किन रहेन त भन्दा एक त वर्तमान सरकारको नेतृत्वको क्षमता र लगावको कमजोरी हो, जसलाई असर पार्ने केही संरचनागत सन्दर्भ पनि छन्।
द्वन्द्वकालमा मुलुकभर प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक संगठनहरू कमजोर भए। झ्न्डै एकदशकको 'संक्रमण' मा पनि यस श्रृंखलाले निरन्तरता पायो। द्वन्द्व र संक्रमणकाल मिलाएर झ्न्डै दुई दशकमा राजनीति बरालियो, प्रहरी र कर्मचारीहरूको आत्मबलमा ह्रास आयो र बौद्धिक वर्गदेखि जुझ्ारुसम्म राजनीति वरिपरि मात्र रुमल्लिन पुगे। कैयन् क्षेत्रमा जस्तै भूकम्पको तयारीमा पनि कमजोरी देखियो।
महाभूकम्प जाँदा न्यूनतम उत्तरदायित्व बोध भएको निर्वाचित स्थानीय निकाय ठाउँमा हुनुपर्ने थियो। निर्वाचित जिविस सभापति, नगरप्रमुख, गाविस अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पद, प्रतिष्ठा तथा 'करिअर' का कारण गम्भीर बन्न बाध्य हुन्थे। परम्परागत सामुदायिक नेतृत्वदायी संस्था तथा तौरतरीका कमजोर भएको सन्दर्भमा ग्रामीण जनताको लागि एउटै विश्वासको थलो थियो स्थानीय निकाय, तर त्यो रित्तो राखियो। अनि कसरी वितरण गर्ने राहत सामग्री? कसले घचघच्याउने राज्य संयन्त्रलाई? जनताले कसलाई पत्याउने, गुहार माग्न कता जाने? दातृ निकाय तथा सहृदयी नागरिकहरूले कसको आडमा राहत वितरण तथा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने? संरचना र प्रक्रियाको अभावमा पहुँचवाला, भ्रष्ट र टपर्टुच्चयाँको बिगबिगी हुनेछ, यही छ शंका र त्रास।
एउटा चारवर्षे संविधानसभा खेर फालेर अर्कोको पनि आधा समय खर्च गर्न लागिसकेका राजनीतिज्ञहरूको जनतामाझ् विश्वसनीयता गुमेको छ। एकदशक मिडियामा निरन्तर छाएका 'नायक' हरू पूरा एकहप्ता मिडियाबाट लोप हुँदा कसैलाई केही अपुग महसूस भएन। संविधान पनि दिन सकेनन्, स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि हुन दिएनन्। आज आएर महाभूकम्पपश्चात् उद्धार र राहतको बेला पनि देखिन सकेनन्।